Wararka Maanta: Arbaco, Oct 17, 2012-Markab sida shixnad ganacsi iyo Dooni Faaruq ah oo ku xirtay Dakadda Caalamiga ah ee Magaalo Xeebeeda Kismaayo
Doonida ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay mid faaruq ah, waxaana ay u timid in ay qaado Dhuxul walow masuuliyiinta dowladda ay diideen in dhuxul laga dhoofiyo Dekedda Kismaayo.
Sida caadiga ah Maraakiibta iyo Doomaha shixnadaha ganacsi keeni jiray Kismaayo ayaa waxa lagu rari jiray Dhuxul taasoo loo iibgeeyo qaar katirsan wadamada carabta, waxayna arintaasi keentay in jarista dhirta ay noqoto ganacsiga ugu weyn ee gobollada Jubooyinka.
Sidoo kale waxa isla shalay magaalada kusoo xirtay Markab sida Shamiito kaasoo u rarnaa ganacsato reer Kismaayo ah, mana jiraan ilaa imika wax shaqo ah oo ka bilowday dekedda.
Mid kamid ah Ganacsatada Kismaayo oo codsaday in aan magaciisa la xigan ayaa HOL u sheegay in weli aysan jirin wax shaqo ah oo ka bilowday dekedda, wuxuuna xusay in uu jiro muran u dhexeeya masuuliyiinta dowladda iyo kuwa Raaskaambooni oo ku aadan maamulka dekedda.
"Weli wax shaqo ah ma bilaaban, waxaa socdo kulamo u dhexeeya masuuliyiinta dowladda iyo kuwa Raaskaambooni, waxaana naloo sheegay in shaqadu bilaaban doonto marka ay kulamadaasi soo dhamaadaan," ayuu hadalkiisii raaciyay.
Degmada Kismaayo weli kama jiro maamul rasmi ah, walow uu imika shaqeynayo maamul ay si KMG ah u dhiseen saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Raaskaambooni, waxaana la filayaa in dhawaan magaalada Kismaayo loo wareejiyo kulan maamul loogu sameynayo gobollada Jubooyinka iyo Gedo kaasoo bilooyinkii u danbeeyay ka socday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
10/17/2012 7:32 AM EST